Carolyn Swiszcz: Qalabka Dabiiciga ah
Mashiinka Waxbarista Joogtada ah Hawlaha Hawlaha on Vimeo.
Maxaa dhacaya marka la abuurayo shaqada dhagaystayaasha sawir-qaadaha ma ku filan?
Inta lagu jiro booqashadayada farshaxanka muuqaalka ah Carolyn Swiszcz riwaayadda guriga ee West Saint Paul, waxay wadaagtay buug ay ku qoran tahay sawiradii ay ku soo noqotay dugsiga hoose. Laga soo bilaabo markii ay ahayd caruur, Carolyn waxa ay samaysay waxyaabo, haddii ay ahayd sawir qalin jiliceeda ah, filimada Super 8, ama sawirro iyo daabacado.
"Waxaan marwalba ogaa inaan rabay inaan noqdo fanaan," ayay noo sheegtay, iyada oo tilmaamaysa sawirka ay ka sameysay nafteeda iyada oo ah qof weyn markii ay weli ahayd fasalka 5aad. Waxay muujinaysaa iyada oo fadhisa meel bannaan ah, oo xiranaysa beret. "Waa wax qosol leh, dib u fiirin, qofna weligay niyad xumo kama soo bixin, ama wuxuu igu yiri," sidee ayaad lacag u sameyneysaa? "
Dhamaan tallaabooyinka Carolyn ayaa ku guuleystey inay soo jiidato nuxurka hal abuurka farshaxanka farshaxanka. Waxay sii wadaa inay hesho wakhtiga iyo xishoodka si ay u shaqeeyaan, u kobciso dhaqankeeda farshaxanka markay tagto; sawirradeeda waxaa lagu muujiyay halkan Minnesota iyo magaalooyinka kale ee kuyaala dalka; Waxay lahayd heshiis fiican oo warbaahin ah; waxay u egtahay inay iibiso farshaxankeeda; waxayna heshay abaalmarino badan iyo deeqo, oo ay ku jiraan Shahaadada Fanaanka McKnight Artist ee 2009kii.
In kasta oo ay sheegto in shaqadani ay ku fiicnayd, wada hadalkayagu wuxuu u muuqday inuu ku wareegsan yahay hubin aan la hubin mustaqbalka; labadaba waxay ku saabsan tahay jihada shaqadeeda, iyo masraxa farshaxanka iyo farshaxanka-sameynta maanta.
Carolyn maaha xishmeyn ku saabsan xaqiiqda ah in inkastoo xirfadeeda farshaxanku ay ku guulaysatay, iyada oo aysan ku guulaysan in ay iibiso farshaxankeeda. Tani ma aheyd goolkeeda ama rajadeeda. Waxay jeclaan lahayd in ay iibiso rinjiyooyin dheeraad ah, laakiin waxay ka taxadareysaa waxa ay ugu yeerto "qaabka wax soo saarka" in qaar ka mid ah farshaxannadu ay ku khasbanyihiin baahida suuqa. Waxay doonaysaa in rinjiyeyaasheeda ay ka soo baxdo aduunka, adoo dareemaya nolosha dadka, halkii ay ka noqon lahayd qolka gurigeeda.
Carolyn waxay sidoo kale fahamsan tahay in farshaxan-yahanno badan iyo ururada farshaxanku ay leeyihiin wax-qabad si ay u tijaabiyaan shaqo badan oo ka-qaybqaadasho leh, oo loo adeegsado dadweynaha. Kordhinta iyo caan ka mid ah noocyada noocan ah ee mashaariicda farshaxanka ayaa ah hal tilmaame oo ah isbeddelkan. Mid kale waxa weeye waxa ay inoo sharaxday annaga oo ka dhimanayna farshaxanno khaas ah, xitaa sida farshaxanka oo dhan guud ahaan u muuqda inuu kor u kaco.
Markii aan la kulannay Carolyn si aan u bilowno mashruucan fiidiyowga ah, kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah su'aalaha maskaxda ku jiray.
Wixii, iyada oo waqtigan, mar dambe kuma filna in rinjiyeynta lagu muujiyo sawirada galabta, iyagoo rajeynaya in dadka kale ay qiimeeyaan qiimaha. Waxay bilowday inay ku noqoto sheeko shakhsiyadeed, oo ah muuqaal hawleheeda hore, waxayna raadineysaa siyaabo cusub oo loogu soo bandhigo sheekooyinka dunidan. Wax ka badan wax kasta, waxay u muuqataa inay raadineyso siyaabo lagu heshiin karo dhaqankeeda sida riwaayad leh rabitaankeeda ah inay la xiriirto dadka, inay saameyn ku yeelato noloshooda, iyo inay bixiyaan wax ay ku raaxaysan karaan, xitaa xaaladaha dhaqaale iyo tiknoolajiyada isbeddelka tiknoolajiyada qaababka farshaxanka (iyo wax kale oo badan).
Carolyn waxay raadineysaa su'aalahan sida ugu habboon ee loo qalabeeyo, iyagoo samaynaya waxyaalla, tijaabin, iyo haynta nolosheeda farshaxanka ah ee dhaqdhaqaaqa weligeed ah. Marka laga hadlayo mashaariicdeeda ugu dambeysa, waxay udubdhexaad u tahay warbaahinta cusub, sahaminta sida sawirkeeda iyo rinjiyeyaashu la kulmi karaan codsiyada isdhexgalka iPad, ama bandhigyada webka ku salaysan. Iyada oo mashruuca Khariidadaha Khariidadda ah, waxaan aragnaa qof qaawan oo qarsoodi ah oo khatarta u leh, isaga oo riixaya ka baxa studio iyo si toos ah loola hadlo dadka aan laga yaabo inay ka fekeraan waxa ay tahay farshaxan, oo dhan si ay wax badan uga bartaan sida loo sheego sheekooyinka , iyo sida loo xiro.
Kuwa adiga ka mid ah, sida Carolyn, oo leh rabitaan aad ku riixdo siyaabo badan oo ay u shaqeynayaan si ay ula xiriiraan dhagaystayaasha cusub, maxay yihiin noocyada waxyaabaha aad isku dayday? Maxay yihiin tabaha aad u shaqeysid si aad naftaada u dhiirigeliso?